Qoysas Danyara ah oo deeq raashin ah ay u qaybisay Hay’adda Somali Relief Network – Radio Muqdisho
Qoysas Danyara ah oo deeq raashin ah ay u qaybisay Hay’adda Somali Relief Network
Qoysaska danyarta ah oo ka faa’ideeysandoona deeqdan raashinka kala duwan ah ayaa gaaraya ilaa iyo 1000 qof oo isugu jira dad da,aah haween iyo caruur kuwaas oo ku nool xeryaha barakacayaasha Degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose iyo deegaanada ku xeeran.
Deeqdan raashinka ah oo la gaarsiinaayo qoysaska danta yar ayaa waxa ay ka timid ha’yadda samafalka ee Somali Relief Network ee Waqooyiga Ameerika oo fadhigeedu yahay dalka Kanada.
Aadan Maxamed Ciise oo ah madaxa hay’adda Somali Relief Network ayaa deeqdan u soo dhibay qoysaska danyarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada afgooye ee Gobolka Shabeelada Hoose iyo deegaanada ku dhow dhow.
,si looga farxiyo qoysaskan danyarta ah Bisha Ramadaan. Wuxuuna ballan qaaday in dadkaasi raashinkii ay ku noolaan lahaayeen Bisha barakaysan ee Ramadan ay Hay’addiisu bixinayso qiimo kasta oo u ku kacayo.
Ibraahim Cismaan Cabdalla oo ah wakiilka hay’adda Somali Relief Network oo deeqdan Raashink ah gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan degmada Afgooye ayaa sheegay in deeqdan ay ka koobneed cuntooyin kala duwan sida:.Bariis, Hilib, Digaag iyo soor.
Dhinaca kale waxa boogaadiyay Hay’adda Somali Relief Network iyo maamulka kabaa Dadka Danyarta ee ka faa’ideeystay deeqdaan.
Golaha Shacabka oo hakiyay kulammadoodii caadiga ahaa
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo ka tacsiyadeeyay Marxuum Cumar Dhalaxow